PUBG: Yatove yakarumbidza vhezheni yeLinux yemutambo wevhidhiyo iyo inotsvaira | Linux Vakapindwa muropa
PUBG (Mutambi Asingazivikanwe's Bttle Ground) Iri zita riri kutaurwa nezvaro zvakanyanya uye rave kubudirira. Kune mazana ezviuru zvevatambi vakasungirirwa pamutambo uyu wevhidhiyo unoshandisa zvimwe zvitsva zvinonakidza zvichienzaniswa nevapfuri vekare.Uye kubudirira kwaita kuti mazwi ekutanga mumaforamu enharaunda paSteam achikumbira vhezheni kuti igadzirirwe Linux, sezvo inowanikwa yeWindows, iOS, Android, Xbox, asi kwete yepenguin chikuva parizvino ...
Tichava vakateerera ramangwana nhau uye kugadzirisa izvo zvatinowana, senge mhinduro yemusimudziri achizivisa kana kana vasina zvirongwa zvekuzadzisa zvikumbiro zvevashandisi vanozviti ndezvake distros. Ehezve PUBG inovimbisa yakawanda uye zvingave zvakanaka chaizvo kuva nazvo kumasystem edu futi. Parizvino pane vatove vamwe vashandisi vakaedza kuiisa kubva kuWINE nemamwe matambudziko uye vamwe vakwanisa kuimhanyisa pamashini eWindows, kunyangwe ichi chisiri chakanyanya kuita kana kushoma.
Kune avo vachiri kusaziva iwo mutambo wevhidhiyo, ayo magiraidhi akanaka kwazvo, mutambo wevhidhiyo mune yakachena Far Cry maitiro uye nezvimwe, uko kune zvimwe zvitsva zvinoratidzwa zvichienzaniswa neyakajairwa shooter sezvandataura. Unogona kutamba mumambure uchipesana nevamwe vanopikisa, kunyanya ivo vachazove 100 varwi Ivo parachuted kuenda kuchitsuwa uye kwavanogona kuwana zviwanikwa zvekuzvisimbisa uye kurwisa vamwe kusvika pasara imwe chete. Ndokureva kuti, inosanganisa zvigadzirwa zvevapfuri, nemutambo wevhidhiyo wekupona uyezve nezvakanaka zvevazhinji vatambi nzira yekutamba online.
Parizvino zvinogona kutaridzika kunge zvakajairika, asi kune imwe ruzivo. Uye ndizvozvo mepu yemutambo wevhidhiyo inotanga kukura. Asi nekufamba kwenguva, mepu inodzikira zvisineyi kusiya nzvimbo shoma uye shoma yevatambi vese nekuvamanikidza kuti vataurirane uye varwe. Ehe, chaizvo, iro renyika yedigital iwe yawakanyudzwa mairi inozoita diki uye diki, saka hupenyu hwerunyararo kure nevashori vako hunopedzisira hwashanduka kuita keji yekiriketi munzvimbo pfupi kusvika iwe uchinge wakunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » PUBG: ivo vatove kurumbidza vhezheni yeLinux yemavhidhiyo mutambo uyo unotsvaira
Ndinovimba tichazozviona rimwe zuva, asi ini ndinofunga vashandisi vanozvikumbira vanofuratirwa nevagadziri. Mhinduro yaizouya nekuti Valve yakaisa pressure,… .uye kunyangwe….
Iwe unayo posvo kana kukumbira kujoina danho? Ivo chete vane mutambo uyu vanogona kutora chikamu muSteam, zvinova zvisina musoro (nei uchizonetseka kuisa mutambo kana vanhu vakautenga zvakadaro)
Ndinovimba rimwe zuva vachaburitsa vhezheni yepubg ye linux uye ubuntu, saka vanhu vese vanoda kuiridza vanogona kuzviita